Tue, Jul 14, 2020 at 6:06am
काठमाडौँ, २१ असार गर्मी बढेसँगै चिसो पिउने मानिसको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । दहीमा चिनी र आइस राखेर बनाइएको सम्मिश्रणयुक्त पेय धेरैको रोजाइमा पर्दछ । अझ यसलाई विशेष बनाउन मन लागे आँप केरा मिलाएर मिक्सचरमा ग्राइन्ड गर्न सकिन्छ । बनाउने तरिका गर्मीमा आँप सिधै धेरै खाँदा गर्मी गड्न सक्छ तर दहीमा मिसाएर लस्सी बनाएर खाँदा गर्मी कम हुनको साथै फाइदा पनि हुन्छ । लस्सी..
भादगाउँ, १५ असार । माग बढेसँगै भक्तपुरको जुजु धौ व्यवसाय फस्टाएको छ । मल्लकालदेखि दहीको राजा उपमाले परिचित भक्तपुरको मौलिक उत्पादन जुजु धौको स्वाद र गुणस्तरका कारण यसको माग बढेसँगै व्यवसाय पनि फस्टाएको हो । नेवारी परम्पराअनुसार जन्मोत्सव, शुभकर्म, यात्रा, सफलता र ठूलो दुर्घटना पार लागेको अवस्थामा दिइने सगुन होस् या भोज दहीको उपयोग अनिवार्य मानिन्छ । पछिल्लो समय पार्टी भोजलगायत दैनिक..
काठमाडौं, ३ असार । फ्राइड राइस भात मन पराउनेहरुका लागि राम्रो परिकार हो । यो साधारण भातको सट्टामा खान सकिन्छ । नेपाली खानपिनमा खाएर बाँकी रहेको बासी भातलाई घ्यु वा तेलमा भुटेर खाने चलन छ । फ्राइड राइस त्यसमा अरु केही सामग्रीहरु थपेर नयाँ स्वाद दिइनु हो । फ्राइड राइस बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री : सिमी, क्याप्सिकम, हरियो प्याज, प्याज सोया सस, जिरा, खुर्सानी,..
काठमाडौं, २७ जेठ सूप, सलाद र अचारमा गोलभेंडा उपयुक्त हुन्छ अनि यसले छालाको चमक बढाइदिन्छ । गोलभेंडामा भएको पोटेसियम, भिटामिन सी र लाइकोपिन पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र कोलेस्ट्रोल घटाउने तत्त्व पनि हुन्छ । पोषक तत्त्वहरूले भरपूर गोलभेंडाको जुस पिउँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । शारीरिक व्यायाम गरेपछि शरीरको ऊर्जा कम हुन्छ । यस ऊर्जाको कमीलाई हटाउन हामीहरू एनर्जी ड्रिंक लिन्छौं तर हराएको ऊर्जालाई..
काठमाडौँ, २३ जेठ दूध एक अत्यावश्यक पौष्टिक आहार हो । बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि दूध उपयोगी पेयपदार्थ हो । मानिसका लागि हितकर हुनुका बाबजुद यसको सेवन गर्दा विचार पुयाउन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा दूध स्वास्थ्यका लागि हानिकारकसमेत हुन सक्छ । मासको दाल मासको दाल खाएपछि दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । मास र दूधमा पाइने केही तत्व एक–आपसमा मिल्दा शरीरमा विभिन्न समस्या..
काठमाडौँ, १७ जेठ नेपाली खाना र मःमको मानिसहरू कति धेरै पारखी छन् भन्नेको उदाहरण मःम फेस्टिवलमा भएको क्रेजले बताएको थियो । अष्ट्रेलियामा नै पहिलो पटक आयोजना गरेको मःम फेस्टिवलको पहिलो प्रयासमा नै मानिसहरू उर्लेर आएका थियो । त्यही मानिसहरूको भीडले बताउँथ्यो कि नेपाली खाना र स्वादले विदेशमा कति आशापूर्ण बजार लिइसकेको रहेछ । सोलाङचरको आयोजनामा यहि २६ तारिख २०१७ मेलबर्नमा मःम फेष्टिभल..
चितवन, ११ जेठ । विदेशमा छ वर्षको बसाईपछि फर्किएका भुवनराज अधिकारीले परिश्रम गर्यो भने स्वदेशमै त्यहाँको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने बल्ल अनुभव गर्नुभयो । दुबईमा मासिक रु ३० हजार हाराहारी कमाइ गर्नुहुने अधिकारीले अहिले दैनिक १५ हजारभन्दा बढीको व्यापार गर्नुुुहुन्छ । भरतपुर महानगरपालिका–६ चोकबजार निवासी अधिकारी विसं २०६० बाट छ वर्ष दुबई बसेर स्वदेशमै केही गर्ने योजना बुन्दै नेपाल फर्किनुभयो ।..
काठमाडौं, १ जेठ । खानाका पारखीहरुको लागि चिकेन बिरयानी एक स्वादिलो परिकार हो । यसरी घरमा मीठो बिरयानी बनाउन सकिन्छ । सामग्री : चिकेन, फ्राई गरिएको प्याज, पुदिना , धनियाँ , दही , ल्वाङ्ग, सुकमेल, तेजपत्ता लगायत वासनादार मसला , तेल , कागतीको रस , अदुवा-लसुनको पेस्ट , हरियो खुर्सानी, जीरा, गरम मसला, खुर्सानीको धूलो, नुन , चामल चाहिन्छ । बनाउने विधि : चिकेनलाई एउटा भाँडोमा..
काठमाडौं, २० वैशाख । आलुलाई नकाटी पकाइने आलुदम आलुको एक स्वादिष्ट परिकार हो, जुन मासु, चिउरासँग वा यत्तिकै पनि खान सकिन्छ । आलुदम घरमै सजिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ । सामग्रीहरु : उसिनेको आलु, प्याज , टमाटर, धनियाँ, खुर्सानी गरम मसला, धनियाँको दाना, जिरा, बेसार, नुन अदुवा र लसुन बनाउने विधि : सबै आलुमा काँटा चम्चाले प्वाल पार्ने । त्यसपछि तेल तताएर बेसार र खुर्सानी फुराउने र आलु राख्ने..
काठमाडौँ, ९ वैशाख अचार नेपाली खानामा पर्ने एक परिकार हो । अचार ताजा तथा गलौटा गरी विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ । अचार प्रायः पिरो , अमिलो या तिखो स्वादको हुन्छ । कहिले काहीँ यसलाई चटनी भन्ने पनि गरिन्छ। काँक्रो, आलु र केराउको मिक्स अचार नेपाली समाजमा लोकप्रिय हुँदै गईरहेको छ । अचार बनाउने तरिका: आवश्यक सामग्री काँक्रो, उसिनेको आलु, हरियो केराउ भुटेको रातो खुर्सानी,..
यसरी बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट ‘साँधेको चाउमिन’
काठमाडौं, ५ वैशाख । नुडल्स मध्ये चाउमिन बनाउन सजिलो, खाँदा मिठो र पाहुनालाई पस्किनको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ । रेष्टुरेन्टको मेनुमा अत्यधिक रोजाइमा पर्ने यो परिकार घरमा पनि सजिलो तरिकाले पकाउन सकिन्छ । यहाँ साँधेको चाउमिन बनाउने तरिकाको चर्चा गरिएको छ । आवश्यक सामग्री चाउमिन, टमाटर, प्याज, गाँजर, क्याप्सिकम रातो धुलो खुर्सानी, नुन, टमाटर सस, सोया सस विधि एउटा भाँडोमा पानी बसाल्ने । त्यो पानी उमालिसकेपछि त्यसमा..
एउटै रेस्टुराँमा ४० थरीका केराका परिकार !
लम्की, १ वैशाख केराका परिकार खाद्यवस्तुका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । कैलालीको टीकापुरमा कृषि व्यवसायी कालु हमालले केराका परिकारलाई खाद्यवस्तुका रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाएका छन् । ‘बनाना किङ’ को परिचयसमेत बनाइसकेका केरा व्यवसायी हमालले अहिले केराका ४० परिकार उत्पादन गर्छन् । हमालले १३ वर्षअघि विगतमा फलफूलका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिने केराखेती गर्न शुरु गरे । उनले केराखेती सँगै केराका परिकार..
इलाम, २१ चैत नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अहिले पनि राम्रो बजार लिनसकेको छैन । सरकारी पक्षबाट यसमा चासो नदिएको भन्दै उद्यमी र किसानले आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । तर, विदेशी चिया बिक्रेताले भने नेपाली चियाको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली चिया प्राङ्गारिक भएको भन्दै यसलाई संसारको सबै देशमा पुर्याउन सकिने बताएका छन् । इलाम सदरमुकाममा भएको एक कार्यक्रममा स्वीट्जरल्याण्डका चिया टेस्टिङविज्ञ ल्याकुन्टेसले..
काठमाडौं, चैत्र । अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा विज्ञहरूले वर्षौँदेखि बहस गर्दै आएका छन्। यसको उत्तर हामी प्रत्येक हप्ता कति अण्डा खान्छौँ भन्नेमा भर पर्ने एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। एउटा ठूलो अण्डामा झन्डै ‍१८५ मिलिग्राम कलेस्ट्रल हुन्छ। यो मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दैनिक अधिकतम खान हुने भनेको ३०० मिलिग्रामको आधाभन्दा धेरै हो। उक्त अध्ययनका अनुसार दिनमा..
च्याउ खाँदा स्मरणशक्ति र मस्तिष्क-क्षय जोखिम कम हुने
काठमाडौँ ४ चैत सिङ्गापुरमा गरिएको एउटा अनुसन्धानले हप्तामा दुई चोटिभन्दा बढी च्याउ खाए त्यसले ६० वर्षमाथिका व्यक्तिमा स्मृति र भाषासँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन नदिने देखाएको छ। च्याउमा हुने एउटा विशेष एन्टिअक्सिडन्टले मस्तिष्कमा सुरक्षात्मक प्रभाव पार्ने सो अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। मानिसहरूले जति धेरै च्याउ खाए उनीहरूले सोच्ने र मानसिक प्रक्रियासम्बन्धी जाँचमा उति धेरै परिणाम प्राप्त गरे। तर अनुसन्धानकर्ताहरूले च्याउ र मस्तिष्कको कार्यबीच कुनै सोझो..
गाईघाट, २४ फागुन पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि उदयपुर गाईघाटका होटल व्यवसायीले स्थानीय जातजातिको खानाका परिकार उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने अभियान चलाएको छ । जिल्ला होटल व्यवसायी सङ्घ उदयपुरले जिल्लाका विभिन्न जातजातिको खानाको परिकारको पहिचान, उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने अभियान शुरु गरेको हो । जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट, कटारी तथा बेल्टार क्षेत्रका होटल व्यवसायीले यहाँका दलित, आदिवासी र जनजाति समुदायका विभिन्न खानाका परिकार..
पर्वत, २२ फागुन लप्सी उत्पादनको पकेटक्षेत्र मानिएको यहाँबाट यस वर्ष अमेरिकामा मात्रै १० टन लप्सी निर्यात भएको छ । लप्सी सङ्कलन, प्रशोधन र व्यापारको काम गर्दै आएको सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले प्रशोधन गरेर तयारी अवस्थामा रहेको १० टन लप्सी अमेरिका पठाएको हो । फलेवास नगरपालिकाको मुडिकुवामा रहेको उद्योगले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर कृषकको लप्सी खरीद गरेर प्रशोधन गर्दै आएको छ । उद्योगबाट उत्पादित..
मिठो र स्वादिलो आलु चप यसरी बनाउनुहोस (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, १६ फागुन । खाजाको परिकारको लागि आलु चप राम्रो र बनाउन सजिलो परिकार हो । शाकाहारीहरूको लागि यो परिकार अझ उत्तम हुन्छ । बाहिर किनेर खाँदा तेलको गुणस्तर कम हुने, बासी हुन सक्ने हुँदा, यसलाई घरमै सजिलो तरिकाले बनाएर ताजा नै खान सकिन्छ । सामग्री : धनियाँको पात र दाना, रातो र हरियो खुर्सानी, प्याज नुन, जिरा, बेसार, अदुवा, बिरे नुन, रातो खुर्सानीको..
स्वादिलो च्याउको परिकार बनाउने तरिका !
एजेन्सी, १२ फागुन अनेकौं तरिकाले च्याउ बनाउन सकिन्छ । गोलभेंडा वा प्याज हालेर वा अन्य तरिकाले बनाइएको च्याउ खान स्वादिलो हुन्छ । यो बेक्ड च्याउको परिकार बनाउने विधि हो । सामग्री तेल एक ठूलो चम्चा लसुन एउटा प्याज ६५ ग्राम भेडेखुर्सानी ११० ग्राम उमालेको च्याउको स्टेम ३० ग्राम च्याउ १६ वटा डल्ला नून एक चम्चा मसला एक चम्चा मरिच एक चम्चा मोजारेला चीज विधि एउटा प्यानमा तेल तताउनुस् । त्यसमा लसुन हालेर तीन मिनेटसम्म भुट्नुस् । अब..
यसरी पकाउनुहोस खसीको मासुका परिकार ?
काठमाडौं, ७ फागुन । मासुमा भिटामिन ‘ए’ भिटामिन बी र भिटामिन डी, आइरन, जिंक, पोटासियमलगायत पौष्टिक तत्व हुन्छ । मासुमा शरीरलाई आवश्यक प्रोटिनको मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वस्थ मासु खाँदा शरीरमा स्फुर्ती आउँछ । हामी घरमै बसेर पनि मासुका धेरै परिकार बनाउन सक्छौं । हामी मासुबाट तयार पार्न सकिने विभिन्न परिकारबारे कमै जानकार छौं । मटन सेकुवा आवश्यक सामग्री मटन १ केजी जिराको धूलो..
काठमाडौँ, ६ फागुन नेपालमा औसत परिवारले आफ्नो आयको औसतमा ५४ प्रतिशत बढी आम्दानी खाद्यान्नको जोहोका लागि खर्च हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न एक स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सो कुराको खुलासा भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सोमबार संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको ‘शून्य भोकमरीतर्फ..
काठमाडौँ, ४ फागुन । कालो मासको दाललाई पकाउनु भन्दा अगाडी केही समय मनतातो पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ । कालो दाल बनाउनको लागि पीडालु, बेसार, तेल, नुन, अदुवा आवश्यक पर्छ । कालो मासको दाल बनाउँदा सुरुमा एउटा कुकरमा भिजाएर राखेको दाल, पीडालु, तेल, बेसार, नुन, कोरेको वा मसिनो बनाइएको अदुवा राखेर पकाउनुपर्छ । पहिले नै यसरि तेल राख्दा दाल उम्लिंदैन । कुकरको चार सिठी..
चितवन, २९ माघ पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय नगरी सौराहामा १३ औँ सौराहा खाना पर्व (फुड फेष्टिवल) शुरु भएको छ । पर्वको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले सौराहाको विकासका लागि सिटि हल निर्माणको काम शुरु भइसकेको बताउनुभयो । प्रणय दिवसको अवसरमा रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन(रेवान) सौराहाले पर्वको आयोजना गरेको हो । सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनाल, जिल्ला..
काठमाडौँ, २८ माघ प्राचीनकालदेखि नै कला र संस्कृतिका धनी नेवार समुदायको मौलिक पहिचानका रूपमा रहेको नेवारी खाद्य परिकारप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । हजारौँ वर्षदेखि परम्परागत चाडपर्व तथा संस्कृतिका कारण नेवारी समाजमा थरिथरिका परिकार पकाइने तथा त्यसरी बनाइएका परिकार देवीदेवतालाई चढाइने र विभिन्न भोज तथा दैनिक खानपानमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । नेवार समुदायको छुट्टै मौलिक पहिचानका रूपमा विकास हुँदैआएका ती परिकार..
लम्की, २३ माघ टीकापुर महोत्सव अवलोकन गर्न आउने अधिकांशको रोजाइमा च्याउका परिकार रहेको पाइएको छ । च्याउका परिकार प्रवद्र्धनका लागि राखिएको ‘स्वादिलो च्याउ कर्नर’मा पाँच दिनमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी अवलोकनकर्ताले च्याउको मःम खाएका छन् । शिव थापा र सिर्जना चौधरीले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरेको च्याउ कर्नरमा मःम खानेको भीड लाग्ने गरेको छ । च्याउ कर्नरमा मःम मात्र नभई च्याउको सुप, पकौडा,..
काठमाडौं, १५ माघ । रोटी खानु स्वाद मात्र नभएर स्वास्थ्यका दृष्टीले पनि राम्रो हुन्छ । रोटीको आलु परौठा परिकार स्वादमा पनि उत्तम हुन्छ भने बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । यो परिकार घरमा विशिष्ट व्यक्तिको आगमन हुँदा समेत पस्किन सकिन्छ। आलु परौठा, सजिलो संग घरमै बनाउन सकिन्छ। ताजा र गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गरेर बनाइने हुनाले घरमा बनाइएको आलु परौठा स्वस्थबर्द्धक समेत हुन्छ । पीठोमा..
बर्दिवास, २८ पुस माघेसङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै महोत्तरी जिल्लाका आदिवासी थारु जाति र मगर बस्तीमा चहलपहल बढेको छ । पर्वको तयारीमा अन्य जातजाति पनि लागे पछि यसलाई मुख्य पर्व नै मान्ने तराईका आदिवासी थारु र मगर बस्तीमा माघसङ्क्रान्ति पर्वको रौनक छाएको हो । थारुले ‘माघी’ भन्ने यस पर्वका लागि माछाको सिद्रा, खसी, हाँस, कुखुरासहितका मासु परिकारको जोहो गरेका छन् । पर्वका लागि छोरीचेली, ज्वाइँचेला..
चिया एक : स्वाद अनेक, इलाममा २५ प्रकारको प्रशोधन, मुल्य प्रतिकिलो ३५ हजारसम्म !!
इलाम, २२ पुस चिया केका लागि पिइन्छ ? जवाफका लागि पर्खनु पर्दैन, स्वादका लागि । हरेक बिहान अधिकांश नेपालीका घरमा चिया पिइन्छ । धेरैले चिया स्वादकै लागि पिउँछन् । हामीले पिउने चिया पनि आ–आफ्नै छन् । कोही चियामा दूध मिसाएर त कोही नमिसाई । हरेक तरिकाले फरक–फरक स्वाद चियामा पाउन सकिन्छ । हामीले पिउने चिया दुईदेखि तीन प्रकारका छन् भने दाम पनि..
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा सडक खाना महोत्सव हुँदै ...
रुपन्देही, ४ पुस बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा हुने सडक खाना महोत्सवमा सहभागी हुन पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकलाई निम्तो गरेका छन् । व्यवसायीले दिनहुँ बैठक तथा भेला आयोजना गरी महोत्सवमा सहभागी हुन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आह्वान गरेका हुन् । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सिद्धार्थ होटल एशोसिएसन लुम्बिनी च्याप्टरको आयोजनामा लुम्बिनी बजारमा सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिँदैछ । ‘लुम्बिनी जाऔँ, सडकमा खाऔँ, सडकमै रमाऔँ’ नारासहित पुस १६..
माछा परिकार : यसरी बनाउनुहोस् ‘फ्राइड फिस वीथ स्पीनाच’, खानै पर्ने ६ कारण
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर माछाको परिकार मन पराउनेहरुका लागि फ्राइड फिस वप्थ स्पीनाच एक स्वादिष्ट परिकार बन्न सक्छ। केहि लाई खसीको मासु र माछा दुबै मन नपर्ने पनि हुन्छ। खसीको मासु र कुुखुरा दुबैको मासु मन नपर्नेहरुले माछाका बिभिन्न परिकार बनाएर स्वाद लिन सक्छन्। माछाका परिकार बनाउन सिपको जरुरत पर्छ। पकाउन जाने अत्यन्तै स्वादीलो र पकाउने सिप भएन भने यो नमिठो पनि बन्न सक्छ। दसै‌मा..
Results 125: You are at page2of 5